မြတ်မွန် - ဝီကီပီးဒီးယား
ကြင်ဖော် အကော်ဒီယံ အုန်းကျော်
သားသမီး (၅) ယောက်
မြတ်မွန်သည် မြန်မာ့ရုပ်ရှင် အကယ်ဒမီရ သရုပ်ဆောင် တစ်ဦးဖြစ်သည်။ မြတ်မွန်၏ နာမည်ရင်းသည် တင်တင်အုန်း ဖြစ်သည်။ ကကြီးရေ က ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားသည် သရုပ်ဆောင် မြတ်မွန်၏ ပထမဆုံးရိုက်ကူးသော ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဖြစ်သည်။ မြတ်မွန်သည် အကယ်ဒမီ ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆု ရရှိခဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်သည်။
မြတ်မွန်သည် ၁၉၅၈-ခုနှစ်တွင် အသက် ၁၆နှစ် အရွယ် (၇)နှစ်တန်းကျောင်းသူ ဘဝနှင့် ရုပ်ရှင်လောကထဲသို့ ဝင်ရောက် ခဲ့လေသည်။ “ကကြီးရေက” ဇာတ်ကားတွင် စတင်သရုပ်ဆောင်၍ ထိုဇာတ်ကား တစ်ကားနှင့်ပင် အောင်မြင်မှု ရရှိကာ ၁၉၅၉ ခုနှစ်တွင် အကယ်ဒမီရရှိခဲ့သည်။ ထို့နောက် “အငို လွယ်သည်၊” “ဧည့်သည်” “အကယ်၍သာ” ဆက်တိုက်ရိုက် ဖြစ်ခဲ့သည်။
အကယ်ဒမီ ရချိန်၌ ဆယ့်ခုနှစ်နှစ်သာ ရှိသေးပြီး ရုပ်ရှင်သက်တမ်းမှာ အသက်အငယ်ဆုံး ဇာတ်ဆောင်ဆုရရှိသော မင်းသမီးတစ်ဦး ဖြစ်လေသည်။ ပထမဆုံး ရိုက်သော ဇာတ်ကားနှင့် အကယ်ဒမီရသည့် မင်းသမီး ထိုခေတ်က မြန်မာပြည်တွင် သုံးယောက်ရှိသည်။ ကြည်ကြည်ဌေး၊ စန္ဒာနှင့် မြတ်မွန်တို့ ဖြစ်သည်။ ကြည်ကြည်ဌေးသည် ချစ်သကေ်၀ ဇာတ်ကား၊ စန္ဒာသည် နှစ်မွှာအသည်း ဇာတ်ကား၊ မြတ်မွန်သည် ကကြီးရေက ဇာတ်ကား ဖြစ်သည်။
မြတ်မွန်နှင့် ခေတ်ပြိုင် မင်းသမီးများမှာ ဝါဝါဝင်းရွှေ‎နှင့် ခင်သန်းနုတို့ ဖြစ်ကြသည်။
ကကြီးရေက ဇာတ်ကား ရိုက်ပြီးနောက် ဒါရိုက်တာ ဦးသာဓုနှင့် အိမ်ထောင်ကျသည်။စာရေးဆရာ၊ တေးရေးဆရာ၊ ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ အာယုသည် ဒါရိုက်တာသာဓုနှင့် မြတ်မွန်တို့မှ မွေးဖွားခဲ့သော သားတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။
။ ဦးသာဓုနှင့် ကွဲပြီးနောက် အကော်ဒီယံအုန်းကျော်နှင့် အိမ်ထောင်ပြုသည်။ ဦးအုန်းကျော်နှင့် မြတ်မွန်သည် သီသီမွန်၊ မာမာမွန်၊ သက်ငုံဖူး၊ ဇာနည်မောင်တို့ ကို မွေးဖွားခဲ့သည်။
အငိုလွယ်သည် (သာဓု. မင်းလွင်)
အဖြေ (ထွန်းဝေ. ကောလိပ်ဂျင်နေဝင်း ၊ တင်တင်နွဲ့ )
ဖတ်စကလပ် (ထွန်းဝေ၊ မေနွဲ့)
ကတ္တီပါဖိနပ်စီး ရွှေထီးဆောင်း (မြတ်လေး)
ပုစ္ဆာဆန်သောမိန်းကလေး (ဇော်ဝမ်း၊ အေးအေးသင်း)
ငါ့ညီ ငါ့မြေ ငါ့အမေ (ညွန့်ဝင်း)
ဖန်ပြာခွက်နဲ့ကျောက်စက်ရေ (ဝင်းညွန့် ၊ တွံတေးသိန်းတန် ၊ စန္ဒာ)
ဇာခန်းဆီးနောက်ကွယ်မှာ (ကောလိပ်ဂျင်နေဝင်း၊ အေးအေးသင်း)
သက်ထားဆိုသော မိန်းမချော (ထွန်းဝေ)
ချစ်ရည်းစား (နေအောင် . မို့မို့မြင့်အောင်)
↑ ပေဖူးလွှာ ရသစုံ မဂ္ဂဇင်းမှ
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မြတ်မွန်&oldid=640689" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၈ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁၊ ၁၄:၃၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။